Miondrika Amin’ny Mpitandro Ny Filaminana Ireo Mpanao Fihetsiketsehana Miaro Ny Demokrasia Any Hong Kong, Fa Tsy Amin’ny Ray Aman-dreniny Mandritra Ny Sakafo · Global Voices teny Malagasy
Miondrika Amin'ny Mpitandro Ny Filaminana Ireo Mpanao Fihetsiketsehana Miaro Ny Demokrasia Any Hong Kong, Fa Tsy Amin'ny Ray Aman-dreniny Mandritra Ny Sakafo
Voadika ny 24 Jolay 2014 4:11 GMT
Vakio amin'ny teny فارسی, Español, русский, English
Nisambotra mpanao fihetsiketsehana nandritra ny fitokonana fitakiana ny demokrasia natao tao Hong Kong ny 1 sy 2 Jolay 2014 lasa teo ny mpitandro ny filaminana. Sary avy tamin'i Xaume Olleros. Fizakàmanana Demotix
Nahasahy nifanandrina tamin'ny mpitandro ny filaminana ireo mpikatroka mafana fo maro be tao Hong Kong nandritra ny fihetsiketsehana fitakiana ny demokrasia nataony vao haingana. Maherin'ny 500 tokoa mantsy ireo mpanao fihetsiketsehana nijanona teo nifanandrina tamin'ireo mpitandro ny filaminana ary nandà tsy hila tamin'ilay fitorevahana natao tamin'ny voalohandohan'ny volana Jolay ary nosamborina noho izany.
Fa tsy manana fahasahiana toy izany akory anefa ny sasany amin'ireo olona ireo raha miatrika ny ray aman-dreniny eo an-databatra fihinànana ka hiresaka fanovàna ara-politika.
Toa manohana ny fijanonana amin'izao ireo olona efa zokinjokiny, mino mantsy izy ireo fa hitondra fikorontanana ara-politika sy ara-toekarena ny fihetsiketsehana sy ny fitokonana. Ireo tanora kosa dia vonona tanteraka ny hiady ho an'ny tena fahalalahana marina, na dia hisy vokany amin'ny ho aviny any aoriana aza izany. Hita matetika mandritra ny resaka ifanaovana mandritry ny fotoam-pisakafoanan'ny mpianakavy io tsy fitovian-kevitra io.
Nampanantenain'i Shina ny hisian'ny fifidianana mivantana any Hong Kong ho an'ny fifidianana izay ho filohan'ny mpanatanteraka amin'ny taona 2017, fa tsy fifidianana avy amin'ny alalan'ny kaomity, fa manantitrantitra kosa ny hoe mbola ho ny komity aloha no mankato ireo mpifaninana. Fari-piadidiana manokana ao Shina i Hong Kong, izay zanatany Britanika fahiny, ary miaina fizakantena betsaka avy amin'ny firenena kaomionista eo ambanin'ilay hevitra hoe “firenena iray, rafitra roa.”
Satria raisina ho zava-dehibe tokoa ho an'i Shina ny “fitiavan-tanindrazana” eo amin'ny toetra hisafidianana ireo mpitantana an'i Hong kong, araka ny taratasy fotsy navoakan'ny fitondrana vao haingana, ahian'ireo mpanao hetsi-panoherana fa ho olona mpanohana an'i Beijing ihany ireo ho mpirotsaka ao Hong Kong, ka mody nasiana ny fifidianana mivantana.
Tato anatin'ny herinandro faramparany teo, mponina avy ao Hong kong an'arivony maro no nilatsaka an-dalambe, ary nahatratra 800,000 no nanao sonia ny fitsapan-kevi-bahoaka tsy ofisialy hitakiana ny zo mba ho afaka hanendry ireo hilatsaka hofidiana. Nanamafy ny fikambanana manao ny hetsi-panoherana “Bodoy am-Pitiavana sy am-Pilaminana ny Afovoany” (Occupy Central with Love and Peace)fa haka am-pilaminana ny afovoan-tanànan'i Hong Kong izy ireo raha tsy manaiky ireo manampahefana.
Na dia eo aza ny fanoherana mahery vaika, namoaka ny tatitra avy aminy momba ny fanavaozana ny fifidianana ny governemanta ao Hong Kong ny herinandro lasa teo, ary namintina fa tsy notohanan'ny maro an'isa ny fahazoan'ny olompirenena misafidy ireo mpilatsaka. Nanoso-kevitra ihany koa ilay tatitra ny hamerana ho roa na telo ny isan'ireo hofidiana.
Nanambatra hery ireo fikambanana olompirenena mpomba an'i Beijing mba hanangona sonia manohitra ny hetsiky ny Occupy Central, nanamafy fa hanimba ny toekaren'ny tanàna io. Nahangona sonia miisa 380.000 hatreto ny ezaka, nandritra ny faran'ny herinandro, raha 800.000 no tanjona.
Niteraka fizarazaràna ara-politika teo amin'ny fianakaviana sy teo amin'ny mpinamana ny fanetsiketsehana nataon'ny roa tonta io.
Nilaza ny fahalemeny amin'ny resaka politika an-databatra mandritra ny fisakafoanana i Li Fung Ling, mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo izay manohana ny hetsiky ny Occupy Central, naneho hevitra tao amin'ny tranonkala mediam-bahoaka inmediahk.net. Nilaza taminy ny reniny fa mety hanohana ny hetsika fanangonan-tsonia manohitra ny Occupy Central, satria inoany fa manangana korontana be ao Hong Kong ireo mpanao hetsi-panoherana. Nangina fotsiny i Li. Nanazava ny fahasahiranany miatrika ny ray aman-dreniny izy:
Anisan'ireo tao anatin'ny sokajy sosialy nahantra indrindra tamin'ny taona 1970 ireo ray aman-dreniko na dia teraka tao Hong Kong aza. Tsy mbola nahazo fampianarana tsara izany mihintsy izy ireo, ary nandany ny fiainana tamin'ny fiasàna tao aminà orinasa natsangan'ireo olona sasany avy any Fujian, Shina. Amin'izy ireo, tsy hitany ny vidin'i Hong Kong. Na dia ny olombelona aza tsy dia misy vidiny loatra. Ny manao izay hitazomana ny kibony ho feno ihany no tena zava-dehibe. […]
Mino izy ireo fa tokony hianatra “hanaiky ny fiainana” ny vahoaka. Ankehitriny, manan-karena i Shina ary mitarika ny fivoarana ara-toekaren'i Hong Kong, voky tsara ny vahoaka aty, ka tokony tsy hitaraina hoe tsy manana ny hajany. Angamba, raha tsy niaritra ny fanalam-baràka nandritra ny fiainany izy ireo, tsy ho afaka nanome ahy ny fitaovana rehetra nilaiko tamin'ny fibeazako. Ankehitriny, raha nahazo fampianarana aho, tokony hampiasa izay haiko momba ny resaka demokrasia ve aho hanoherako azy ireo sy hitsikerana ny heviny tsy mety hiova ? Tsy vitako izaho tenako ny hanao izany. Mamelà ahy ny amin'ny tsy fisian'ny teny ahafahako manazava ny ato an'eritreritro aho.
Nandrafitra taratasy fankaherezana ireo mpikatroka mafana fo ” hiala” amin'ny ray aman-dreniny ny mpampiasa Facebook tsy mitonona anarana iray “Letter to Babamama” (taratasy ho an'ny Dadaneny), mba hiatrehana ny fahasahiranana mifampiresaka ny lafiny politika eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka:
Mety ho bedinareo aho na ho voakapoka mihintsy, kanefa tokony hilaza ny marina aminareo aho. Nandray anjara tamin'ny fihetsiketsehan'ny Occupy Central ny 2 Jolay teo aho, ary voasambotra. Hetsika tanatin'ny filaminana io. Tsy nisy ny naratra Tsy nisy firaketana heloka ara-panjakana ny fisamborana. Tsy sahy niresaka taminareo ny momba izany aho satria tsy tiako ny hisian'ny fifandirana eo amin'ny fianakaviana, ary ny hampalahelo anareo. […]
Tiako ianareo roa ary tiako i Hong Kong. Antenaiko fa ho tsapanareo hoe tsy mambolyfanakorontanana izahay. Antenaiko fa ho tsapanareo hoe mieritreritra fandriampahalemana izahay. Nanandrana fomba maro aho talohan'ny hetsika Occupy Central. Nandray anjara taminà fifidianana maro aho [distrika sy filankevitra mpanao lalàna], Namonjy famoriam-bahoaka sy nanatevinalaharana ireo hetsi-panoherana am-pilaminana aho. Nanoratra fomba fijery maro ho an'ny fitondrana aho. Toy ireo vahoaka hafan'i Hong Kong, naneho ny tsy fahafalianay taminà fomba ara-dalàna maro izahay, fa milalao anay foana ny fitondràna ary tsy miteny tsy mivolana hatrany. Nandefitra loatra ny vahoakan'i Hong Kong. […]
Miangavy, mba henoy ity zanaka lahikelinareo saron-kenatra ity.
Pejy Facebook iray antsoina hoe “Politics with relatives” (politika miaraka amin'ireo ray aman-dreny), nizara tantara iray hafa momba ny fifandirana eo amin'ny fianakaviana. Mino ireo ray aman-dreny fa tarihin'ireo hery avy any ivelany daholo ny hetsi-panoherana rehetra. Tafiditra anaty fifanakalozan-dresaka ny fihetseketsehana iray manohitra ny fampivoarana ireo Faritra Vaovao any Avaratra Atsinanan'i Hong Kong ho tanàna roa mba hisian'ny trano fonenana bebe kokoa. Manahy ireo mpanohitra fa hamotika ireo vondrom-piarahamonin'ny mpamboly izay sisa tavela ao Hong Kong ilay tetikasa 614-hektara, izay latsaky ny 96 hektara na 16 isanjato no atokana ho an'ny trano fonenana.
Nitaky ilay raim-pianakaviana fa tokony hosamborin'ny mpitandro ny filaminana ireo “tanora tsy tafita” rehetra ka ampidirina am-ponja ampolo taonany. Tsy nahatàna ny fahanginany intsony ilay zanany lahy ary nitomany raha nitàna ny fitaovana fanaovana kajy entiny hampisehoana amin-drainy hoe ahoana ny mety hahatonga azy ho ” tsy tafita” amin'izao toetoetry ny fifanarahana miafina eo amin'ny governemanta sy ny orinasa ankehitriny izao :
Hoy aho tamin'ny raiko : Andao ary atao hoe nandray karama 15.000 dolara Hong Kong aho [mifanahantsahana amin'ny 2.000 dolara amerikana] raha mahazo diplaoma. Firy taona aho vao hahangona ny vola aloa voalohany raha hividy tranonà 300 m toradroa any Tin Shui Wai [faritra mora indrindra ao Hong Kong]? Ohatrinona no tsy maintsy aloako ny amin'ny antoka isam-bolana? Dia firy taona aho izany vao afaka mba manana zanaka? Niala tsiny tamin'ny raiko aho tamin'ny volbe naloany ho fampianarana ahy, saingy tsy afaka mividy sakafo ho an'ny tenako akory aho ary mety mbola tsy maintsy mipetraka miaraka amin'ireo ray aman-dreniko hatramin'ny fahatelopolo taonako. Mifandray tendro amin'ireo orinasa ny fanjakàna, ary amin'ny manisaka ny fananam-panjakana ho any anaty paoketran'ireo mpandraharaha amin'ny resaka tany sy trano. Miasa toy ny andevo isika ary tezitra mafy aho fa tsy afa-manoatra.
Taorian'ny famoahako ny alaheloko, nangina nandritra ny fotoana lavalava ny raiko. Toa hita fa somary nanitsy kely ny fomba fiheviny izy.
Na dia mbola mino izay lazain'ny fanjakàna aza izy hoe hanome vahaolana amin'ny fanomezana tany ny fanitarana ny Avaratra atsinanan'ny faritra vaovaon'i Hong Kong, tsy hiteny intsony izy fa voavidin'ny Etazonia vola ireo mpanao fihetsiketsehana, ary lasa tsy dia sosotra loatra tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana intsony.
Fandresena kely, angamba, saingy afaka hitondra fiovana lehibe ny fandresena kely maromaro, raha tsy ho an'ny hoavin'i Hong Kong, dia ho an'ny hoavin'ireo sakafon'ny mpianakavy.